नायिका बर्षा राउत, यस्तो फरक लुक्समा,.(२० तस्बिर सहित) - Samachar Post Dainik
नायिका बर्षा राउत, यस्तो फरक लुक्समा,.(२० तस्बिर सहित)
पोखरा – नायिका वर्षा राउतले केहि पहिला बिवादमा तानिइन् । बि,वाद,पछि उनी अहिले भने शान्त महशुस गरेकी छन् ।उनी हालै मात्र आफ्ना केही फ्यानहरुसँग भेटघाट गरिन् ।
फ्यानसँग डेट गरेका तस्बिर उनले सामाजिक संजालमा शेयर गरेकी छन् ।जहाँ उनी ब्ल्याक ड्रेसमा देखिएकी छन् । ब्ल्याक ड्रेसमा उनी निकै ब्युटिफुल देखिएकी छन् । हेरौ उनका सुन्दर तस्बिर।
प्रकाशित मिति ६ मंसिर २०७७, शनिबार ०६:१४